Zvikwata zveBlack Rhinos, neHighlanders Zvosarudza Varairidzi Vatsva
Black Rhinos yasandura tsika dzayo dzemakore apfuura nekupa basa murairidzi asiri nhengo yeZimbabwe National Army.
Chikwata ichi chapa basa kuna Hebert Marowa uyo aimbove kuDynamos uyezve asina kunge aine hukama neChipembere. Murairidzi uyu ange achirairidza kuBotswana makore maviri apfuura.
Aka ndiko kekutanga pamakore gumi apfuura kuti chikwata cheZimbabwe National Army ichi chipe basa kumurairidzi asiri nhengo yeZimbabwe National Army mushure mekusandura varairidzi vakaita saNesbert Saruchera, Droment Chirova, Jack Mutandagari, Gift Makoni naMaronga Nyangela avo vanove nhengo dzeZimbabwe National Army.
Marowa uyo aive mutevedzeri waKalisto Pasuwa apo Dynamos yakatora mukombe weligi kana kakateverana ane mutoro mukuru kuedza kudarika zvakaitwa naMtizwa uyo akasvitsa Chipembere pachinhanho chechinomwe mugore ravo rekutanga muPremier Soccer League.
Black Rhinos yaive muDivision One mwaka wa 2016. Mtizwa akasiiswa basa mushure mekunge Black Rhinos yakapedza iri pachinhanho chechinomwe, panguva iyo vatungamiri vechikwata ichi vaida kuti Rhinos ipedze iri pazvikwata zvina zvaive pamusororo soro.
Marowa ndiye mumwe wevarairidzi vana vatsva vachange vari muPremier Soccer League gore rino kusanganisra Joseph Takaringofa, Godfrey Tamirepi, naBekithmba Ndlovu.
Zvichakadaro, chikwata cheHighlanders chazivisa icho kuti chichadoma murairidzi wacho mutsva nemusi weChina.
Sachigaro weBosso VaModerm Ngwenya vataurira vatori venhau kuti varikupa basa kumurairidzi akambotambira Highlanders, anoziva tsika dzeHighlanders, uyezve anoziva zvinangwa zveHighlanders.
Asi vanoziva zviri kuitika vanoti Highlanders yakatopa basa kare kunaMadinda Ndlovu uyo anga ari kuBotswana asi parizvino adzoka muBulawayo, chasara chete kuri kuzivisa veruzhinji.
Madinda anonzi akatosarudza kare mutevedzeri wake achinzi iye akatozivisa veHighlanders kuti ari kuda Mandla Mpofu kuti amubatsire pabasa rakakosha iri.
Vatsigiri veHighlanders havasi kufara mushure mekunge chikwata chavo chakapedza chiri pachinhanho chechitanhatu mwaka wapera kunyange hazvo chaive nevatambi vaiyemurwa nezvikwata zvakawanda.
Totarisa mutambo wekiriketi. VeZimbabwe Cricket vavhara vende rakasiiwa naMakhaya Ntini nechimbi chimbi mushure mekupa basa kuna Douglas Hondo uyo akaita mukurumbira achitambira chikwata chenyika ichi.
Pamusoro pezvo, vatungamiri vemutambo uyu vadzora zvekare Walter Chawaguta semutevedzeri wemurairidzi wechikwata ichi Heath Streak panguva iyo Zimbabwe iri kuda kusandura mafambiro ari kuita zvinhu munhandare.
Hondo naChawaguta vaive nhengo dzevarairidzi vemaChevrons muna2014 apo Zimbabwe yairairidzwa naAndy Waller.
Hondo naChawaguta vabatana nechikwata cheZimbabwe icho chiri munzira kuenda kuBangladesh uko vari kunotamba mumakundano ezvikwata zvitatu zvinosanganisirawo Bangladesh neSri Lanka.
Asi muteveri wemutambo uyu VaShingirai Miti vanoti varairidzi vechikwata ichi vane basa guru zvichitevera kungozvindikitwa kurikuitwa maChevrons apo varikutamba nedzimwe nyika.
VaMiti vanoti semaonero avo, Hondo, Chawaguta, nemurairidzi wemaChevrons Heath Streak vanofanira kuvaka chikwata chitsva nechimbi chimbi.
Kuti vachengetedze basa ravo, vatambi veZimbabwe vanofanira kutanga kukunda murwendo rwavo rwekuBangladesh uko vari kutanga kutamba musi wa 15 Ndira vasati vaenda kunotamba neSri Lanka musi wa 21 Ndira.